Ny Torre de los Picos de la Alhambra dia hisokatra amin'ny besinimaro amin'ny volana Jolay | Vaovao momba ny dia
Tato ho ato, ny filankevi-pitantanan'ny Alhambra sy Generalife of Granada dia manome fifaliana lehibe an'ireo tia an'ity tanàna ity sy ity tsangambato mahatalanjona ity. Araka ny nangoninay volana lasa izay tao Actualidad Viajes, nandritra ny volana Mey dia nisokatra tamin'ny besinimaro ny Torre de la Cautiva, izay matetika no mikatona noho ny antony fiarovana.
Noraisina tsara ny fandraisana andraikitra ka nanolo-kevitra izy ireo ny hahita zorony hafa amin'ity trano mimanda ity amin'ny volana Jolay ho avy. Tsy misy mihoatra ary tsy misy hafa noho ny Torre de los Picos, izay matetika mihidy koa noho ny antony mitovy amin'ny Torre de la Cautiva. Izany no antony, raha manomboka ny vakansy any atsimo ianao amin'ny volana ho avy, dia mety te-hitsidika ny Alhambra any Granada ianao hijery ny Torre de los Picos amin'ity fotoana miavaka ity. Manaraka izany, fantatsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny Tilikambo amin'ny tampon'ny Alhambra any Granada.
1 Tantara fohin'ny Torre de los Picos
2 Avy aiza ny anaranao?
3 Inona no fiasan'ity tilikambo ity tany Alhambra?
4 Aiza ny Torre de los Picos?
5 Inona ny ora fitsidihan'ny Torre de los Picos?
6 Mahafantatra ny Alhambra any Granada
Tantara fohin'ny Torre de los Picos
Sary | Lasibatra Granada
Nikatona matetika ho an'ny besinimaro noho ny antony fitehirizana azy, io tilikambo io dia natsangana tamin'ny andro nanjakan'i Sultan Muhammad II ary nohavaozin'i Muhammad III sy Yúsuf I. Taorian'ny fandresen'ny Kristiana, ny Torre de los Picos dia niharan'ny fanovana isan-karazany sy fanamboarana, araka ny notaterin'ny Birao Alhambra sy ny Generalife.
Avy aiza ny anaranao?
Raha toa ka nomena anarana toy izany ny Torre de la Cautiva satria heverina fa Dona Isabel de Solís (vehivavy kristiana nalain'ny Sultan Muley Hacen ary nanjary vadiny taorian'ny fanekena ny Silamo dia nonina tao), Ny Torre de los Picos dia manana ny anarany amin'ny corbels izay ananany eo amin'ny zoro ambony hanohanana ireo milina sy handresy ireo andrana fanafihana avy any ambony.
Inona no fiasan'ity tilikambo ity tany Alhambra?
Heverina ho iray amin'ireo tilikambo lehibe indrindra amin'ny drafitry ny vala iray manontolo, Izy io dia nanana andraikitra fiarovana ary koa nitoetra ho trano fonenana, porofon'ny haingon-trano anatiny, ny asa vita amin'ny plastera ary ny hosodoko.
Izy io koa dia nanana andraikitra lehibe tamin'ny volavolan-tanànan'ny Alhambra satria niaro ny iray amin'ireo vavahady fidirana amin'ny fidirana amin'ny rindrina, ny an'ny Arrabal, izay nivoha teo amin'ny tehezan'i Rey Chico ary nampifandray ny tanàna palatine tamin'ny faritry Albaicín sy ny fidirana taloha mankany amin'ny Generalife.
Aiza ny Torre de los Picos?
Sary | Toerana Granada
Ny Torre de los Picos dia miorina eo amin'ny Paseo de las Torres, misy ny sasany amin'ireo sary mampiavaka ny trano mimanda Nasrid, toa ilay Torre de la Cautiva voalaza teo, Torre de las Infantas, Torre Cabo de la Carrera ary ny Water Tower.
Ny fomba fijery avy amin'ity toerana ity dia manaitra tokoa satria amin'ny lafiny samihafa amin'ny diabe dia azonao atao ny mahita fomba fijery ankapobeny momba ny fananana Generalife, miaraka amin'ireo saham-boankazo antonontany tsara tarehy.
Inona ny ora fitsidihan'ny Torre de los Picos?
Ny Torre de los Picos dia azo tsidihina manokana amin'ny talata, alarobia, alakamisy ary alahady manomboka amin'ny 08.30:20.00 ka hatramin'ny 30:XNUMX miaraka amina vondron'olona XNUMX ary miaraka amin'ny tapakilan'i Alhambra jeneraly sy ny tapakila Alhambra Jardines, Generalice ary Alcazaba.
Mahafantatra ny Alhambra any Granada
Raha fantatra amin'ny zavatra manerantany i Granada dia ho an'ny The Alhambra. Ity firavaka espaniola espaniola ity dia natsangana teo anelanelan'ny taonjato faha-1870 sy faha-XNUMX tamin'ny andron'ny fanjakan'ny Nasrid ho tanàna palatine sy trano mimanda miaramila, saingy trano Royal Christian ihany koa izy mandra-panambarana azy ho tsangambato tamin'ny XNUMX. Tamin'izany fomba izany, ny Alhambra dia nanjary mpizahatany manana ny maha-zava-dehibe azy ka natolotra ny Fahagagana Vaovao fito eran'izao tontolo izao aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Ny volana Jolay vao hisokatra ho an'ny besinimaro ny Torre de los Picos de la Alhambra